Lozam-pifamoivoizana :: Mpitondra môtô maty tsy tra-drano teny Ivato • AoRaha
Nitrangana lozam-pifamoivoizana teny amin’ny lalam-baovao Ivato, afak’omaly alina. Maty tsy tra-drano ny lehilahy, dimy amby efapolo taona, nandeha môtô. Voadonan’ ny fiara tsy mataho-dalana ny kodiaran-droa nentiny.
Fantatra fa nandeha mafy ity fiara tsy mataho-dalana iray nahadona môtô teo alohany. Nifatratra tamin’ny fefy vy teo an-tsisin-dalana izy, taorian’ izay. Namoy ny ainy kosa ilay mpandeha môtô. Latsaka tao anaty tatatra ilay mpitaingina môtô sy ny kodiaran-droa nentiny. Simba tanteraka ny lohan’ny fiara. Voatazona atao famotorana eny amin’ny zandary ny mpamily nitondra azy.
Tsy vao sambany no nahafaty olona tahaka izao iny lalam-baovao mampitohy an’i Tsarasaotra amin’Ivato iny. Efa nahitana mpamily sy mpandeha fiara sy môtô ary mpandeha an-tongotra tra-doza ka namoy ny ainy teny.